Meeraha Mars Waxa Uu Leeyahay “Waji Farxad”! | Xaqiiqonews
Meeraha Mars Waxa Uu Leeyahay “Waji Farxad”!
Godka ku yaalla dhinaca waqooyi ee meeraha Mars, godkaasi oo loo yaqaan “Wajiga farxsan” ayaa sanadihii ugu dambeyey noqday mid si weyn loo arki karo.
Misbaarka MRO oo ay leedahay NASA, kaasi oo sahan ahaaan u jooga Mars ayaa isaga oo adeegsanaya kaamirooyinka tayada sare ee HiRISE waxa uu markii ugu horeysay sanadkii 2011 soo duubay “Sawirka dhoolla cadeynaya” kaasi oo saynisyahanada ay u bixiyeen “Wajiga faraxsan”.
Cilmi baarayaasha ayaa isbarbar dhig ku sameeyey sawirka godkan laga soo qaaday 2011, iyo sawir kale oo isla godkan laga qaaday 2020 iyaga oo cadeeyey in godka uu weynaaday si la dareemi karo.
Sidoo kale Aqri: Seddex Qaab Oo Magacaada Aad Ku Gaarsiin Karta Mars
Misbaark sahanka ee MRO, ayaa baaritaanada uu ka wado Mars bilaabay wax yar un ka dib markii uu halkaasi gaaray sanadkii 2006.
Sawirada u eg muuqaalka aadanaha ee lagu arko geedaha iyo dhulka iyo waxyaabaha kale ee aan nooleyn ayaa saynisyahandu waxa ay u yaqaanaan pareidolia, waana dhif iyo naadir in waxyaabahaas camal lagu arko meeraha Mars.
Dhamaadkii Diseembar dayax gamceed ay laheyd wakaaladda xiddigiska reer Yurub ayaa qaaday sawir u eg malag kaasi oo sita koofiyad daboolan iyo baalal muuqaalka ayaana lagu arkay meel u dhaw cirifka koonfureed ee Mars